के रवि लामिछाने अब राजनीतिमा आउँछन् त ?
पाेखरा ११ भदाै- करिब १ वर्षयता मसंग टेलिभिजन छैन । मेरा लागि टेलिभिजनको युग ‘फेज आउट’ भएको छ । बिहानै छोरीहरु स्कुल/कलेज जान्छन् । साँझ मात्र आउँछन् । श्रीमति आफ्नै काममा निस्किन्छिन् ।
सायद रवि आफैले यो कल्पना गरेका थिएनन् कि उनको लोकप्रियता यति धेरै छ । जुनसुकै पेशा र कर्मबाट होस्, समाजलाई असल विचारतिर अभिप्रेरित गर्नु सकारात्मक योगदान हो । यस अर्थमा रविलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद छ । रवि जोडिएको केस राजनीतिक तथा सामाजिक थिएन । मूलतः त्यो क्रिमिनल केस थियो । यस्ता केसमा पुलिसले मान्छेलाई हिरासतमा लिनु, छानबिन गर्नु, प्रमाण वा सुराक प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु स्वभाविक हुन्छ ।
संसारभरि नै गरिन्छ त्यो । रवि जोडिएको केसको वास्तविकता के हो ? त्यहाँ कस्लाई न्याय हुँदैछ, कस्लाई अन्याय हुँदैछ, त्यतातिर जान चाहन्नँ म । कुनै पनि क्रिमिनल केसमा सजिलै बोल्नु बान्छनीय हुँदैन । त्यसका लागि पर्याप्त प्रमाण र आधार चाहिन्छ । अध्ययन र ठहर चहिन्छ । त्यो पुलिसले गर्दै गर्ला ।
प्रश्न कहाँ हो भने जनताले पुलिस र राज्यलाई विश्वास गरेनन् । किन त ? किन जनताले एउटा व्यक्तिलाई विश्वास गर्‍यो तर पुरै राज्य संयन्त्रलाई अविश्वास गर्‍यो ?
डम्बर खतिवडाः यो अवस्थामा विस्तारै साझा पार्टी र रविन्द्र मिश्रको नियति दोहोरिन्छ । अरुलाई मात्र प्रश्न र आक्रमण गर्दा मिश्रजी हाईहाई थिए । जब उनी माथि नै प्रश्न र आक्रमण हुन थाल्यो उनी फिका हुँदै गए । विवेकशील दलका युवाले मिश्रजी माथि तिनै आरोप लगाइए दिए जो उनी पुराना पार्टीका नेताहरुलाई लगाइरहेका थिए । उनी माथि पनि त्यही अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको सुनिश्चित नगरेको, नयाँ पुस्तालाई नसहेको, आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेको, आफ्ना निजी विचारहरुलाई नै पार्टी विचार जस्तो बनाउने आत्मकेन्द्रित सोच देखिएको, अतिमहत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेकोजस्ता आरोप लाग्यो ।
चौथो– नेपाली मतदाताको मनोविज्ञान बढो विचित्रको छ । उनीहरु अरु दिन पुराना नेतालाई गाली गर्छन् । चुनावको एक दिन फेरि तिनै नेता र पार्टीलाई भोट हाल्छन् । विगत ३ दशकदेखि यही दोहोरिरहेको छ । यसो हुनुको गहिरो सामाजिक/मनोवैज्ञानिक कारण छ । नेपालमा विशेषतः कांग्रेस–कम्युनिष्टको बलियो नेटवर्क छ ।
मतदाता मातृपार्टी भावनामा संस्कारित छन् । एजेण्डामा भोट दिने मतदाताको चेतना निर्माण भएकै छैन । जब चुनाव आउँछ, आमाबुबा, काकाकाकी, मामामाइजु, साथीभाइले नयाँ र स्वतन्त्र मतदातालाई च्याप्दै लग्छन् । ‘अरु बेला जे गर, तर भोट चाहिँ मेरो पार्टी र उम्मेद्वारलाई दे’ भनेर नयाँ पुस्तालाई पुरानाले चौखुर्‍याउँछन् । यो मनोवृति तोड्न धेरैलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ, त्यो रविका लागि पनि सहज हुने छैन ।
पाँचौ– नेपाल ठिमाहा संसदीय शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली कायम भएको देश हो । देशमा नयाँ नेतृत्व जन्मिन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ । त्यो प्रणालीमा एउटा व्यक्तिको लोकप्रियताले पनि धेरै ठूलो काम गर्दछ । तर संसदीय प्रणालीमा निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे फरकफरक समीकरण र व्यक्तित्वहरु हुन्छन् । रविले पाटी खोल्ने बित्तिकै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभावकारी उम्मेद्वार पाउन सम्भव हुँदैन । यी चुनौतिलाई सामना गर्नेगरी राजनीतिमा आउँछन् र साँच्चै पार लगाउँछन् भने त्यो सर्वथा एक क्रान्ति सरह हुनेछ । सायद उनले यो आँट गर्दैनन् ।
जसोतसो कोमल ओली राष्ट्रियसभा सदस्य बनेकी छन् । तर, त्यो पद प्राप्ति मात्र हो, कुनै आदर्श प्राप्ति हैन । उनी राप्रपाबाट एमाले पुगिन्, जबकी यी दुई पार्टीको विचार र एजेण्डामा कुनै समानता थिएन । राजनीतिक मर्यादाको दृष्टिकोणबाट यो अस्वभाविक र अनैतिक कार्य थियो । विचरी, पदका लागि हापझाप त गरिन तर राजनीतिमा कुनै मौलिक स्थान बनाउन सकिनन् । सायद सक्दिनन् पनि । रविको व्यक्तित्व पनि कुनै न कुनै हिसाबले सेलिब्रेटी व्यक्तित्व नै हो । नेपाली राजनीतिमा सेलीब्रेटीहरुको जुन ट्रेन्ड छ, त्यो उनमा पनि दोहोरिन सक्छ । राजनीतिका अनेक व्यवहारिक जटिलता र आयामबारे उनी जानकार, प्रतिबद्ध र दृढ छन् जस्तो लाग्दैन ।